Wararka - Sida Loo Sameeyo Sanduuqa Soo Jiidashada
Baakaduhu waxay u jiraan difaac ahaan badeecada gudaha ah, hase yeeshe, horumarka dhaqaalaha adduunka, baakaduhu waa inay ku daraan qiime dheeri ah. Si aad uga dhex muuqato muuqaalka macaamiisha maanta, waa inaad gaartid "wow factor", taas oo ka dhigaysa naqshadda baakadaha mid aad muhiim u ah.
Laakiin sidee loo qaabeeyaa sanduuq baako soo jiidasho leh?
Marka hore, waa inaan ogaanno waxa aad rabto inaad muujiso, dabeecadda asaasiga ah ee alaabtaada. Maxay faa'iidadaadu tahay marka la barbardhigo sheyga la midka ah ee suuqa ku jira. Markaa waad ogtahay sida aad rabto inaad u egtahay.
Marka labaad, waa inaad cadeysaa waa kuma dhagaystayaashaadu? Haddii ay tahay gabdho yar yar, ka dib wuxuu naqshadeynta ka dhigayaa mid qabow oo muuqata. Haddii ay tahay nin da 'dhex dhexaad ah oo guuleysta, markaa naqshadeynta ayaa ka dhigeysa mid quruxsan laakiin qurux badan
Kadib, waxaad dooran kartaa qaabka sanduuqa, maaddada iyo farsamada gacanta. Tani waxay u dhaqaaqaysaa aagga xirfadda leh. Waxaad ka heli kartaa kooxdaada naqshadeynta inay sameeyaan, ama waxaad na siisaa fikrad guud / fikrad, waxaan ka caawin karnaa inta hartay.